ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင့်အသက်တာ၏မတ်ေတာ Get မှ Little ကသိနည်းလမ်းများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 07 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ကံကြမ္မာမေတ္တာ၌ကျဆင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပုံရိပ်နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခါတစ်ရံပိုမိုကျယ်လောင်စကားပွောနိုငျ. အောက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့သင်၏အသက်တာ၏မေတ္တာကိုရနိုင်သည့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအဝတ်မခြုံဘဲပါပြီ.
လူသိနည်းသော Way ကို #1: ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်
တစ်ဦးကဆက်ဆံရေးကိုအချိန်ကြာ, ကတိကဝတ်, နှင့်အားနည်းချက်. ကျန်းမာတဲ့နှင့်အောင်မြင်သောဆက်ဆံရေး key ကိုပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒီမေတ္တာသည်သင်အမှန်တကယ်အခြားလူတစ်ဦးကိုချစ်ခွင့်ပြု. ခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေး, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ, ယုံကြည်မှုအပျေါမှာတညျဆောကျနေကြတယ်, ရိုးသားခြင်း, နှင့်ဆက်သွယ်ရေး.
လူသိနည်းသော Way ကို #2: သင့်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းကိုသိအသိအမှတ်ပြု
ကလုံးဝသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုစစ်ကြောစီရင်ဖို့မမျှတနေ, ကန့်သတ်တည်ထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်က. ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ဆီးတားနိုင်ကြောင်းအချို့သောအကြံအစည်အပြုအမူရှိပါတယ်သိ. ကျွန်တော်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်လိုလိုကိုသိမှတ်အပြုအမူတွေနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်ကိုလည်းကျနော်တို့သိ. သူတို့အားသိမှတ်ကြလော့သင်တို့၏အရေးပါသောအခြားရှာဖွေတာဖို့လမ်းခင်းရန်ကူညီပေးပါမည်.
လူသိနည်းသော Way ကို #3: တစ်ဦးကို Person Loving နှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်စေ Loving အကြားခြားနားချက်ကိုသိ
အဘယ်အရာကိုမျှမေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်း beats; သို့သော်, တစ်ခါတစ်ရံဒီခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကြောင်းကိုဟုတ်မှန်သောအကြံအစည် overpowers. သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ core ရညျအသှေးနှငျ့သငျသူတို့အပျေါမှာပြဌာန်းမြားအကြားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိအာရုံစိုက်ဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
လူသိနည်းသော Way ကို #4: မှန်ကန်စွာရွေးချယ်အချိန်ကာလမှာညာဘက်ရာဌာန၌ဖြစ်
ငါတို့သည်ငါတို့၏ဒြပ်စင်၌ရှိကြ၏တူကျနော်တို့ခံစားရဘယ်မှာအချို့သောအရပ်တို့ကိုရှိပါတယ်. ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျြောရှငျတဲ့နာရီအချိန်တွင်ဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲသို့မဟုတ်အနုပညာပြပွဲမှာ, ဒါမှမဟုတ်အတန်းအစားမှာ, ထိုအရပ်၌ဖြစ်. သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတောက်လိမ့်မည်, သငျသညျလူတွေကိုဆွဲ.
လူသိနည်းသော Way ကို #5: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးစပ်တော်ရှေ့မှာစိတ်ခံစားမှုနီးစပ်ဘို့ကွိုးစားပါ
ရှာဖွေတာနဲ့အတူ “သင်၏အသက်တာ၏မေတ္တာကို”, တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းနှောင်ကြိုးအလွန်အရေးပါသည်. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးသို့အပြေးအလွှားသေချာပေါက်မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ထိုသို့သွားလာရန်စိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုး ပို. ခက်ခဲစေနိုင်.
လူသိနည်းသော Way ကို #6: သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်ကိုးစား
သင့်ရဲ့အူကိုနားထောင်, သင်၏အချိန်ယူပြီးသက်သာဖြစ်, နှင့်သင်၏တရားစီရင်ပိုင်အတွက်လူနာဖြစ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်သစ်ကိုအကြံဥာဏ်များနှင့်သညာမှပွင့်လင်းဆက်လက်တည်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်က.
သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်, ဤသူတို့သည်လူသိနည်းသောနည်းလမ်းများ, သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး – စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အရှုံးမပေးဘယ်တော့မှရန်အရေးကြီးပါသည်က. သင်ရှိသည်တခါများအတွက်, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့အများဆုံးအကျိုးခံစားသည်.